Semalt Expert: Python uye BeautifulSoup. Nzvimbo dzeSprape Zvine Ruzha
iyo data inoda uye inopedza basa rako. Mutauro wekushandiswa kwepythoni une simba rakakura rezvishandiso uye ma modules anogona kushandiswa nokuda kwechinangwa ichi. Semuenzaniso, unogona kushandisa Modus BeautifulSoup yeHTML parsing.
Pano, tichatarisa BeautifulSoup uye tione kuti sei ikozvino iri kushandiswa zvakanyanya mu web scraping .
- Inopa nzira dzakasiyana-siyana dzekufamba nyore nyore, kutsvaga nekugadzirisa miti yakasiyana-siyana nekuita kuti iwe usvibise zvinyorwa zvinyorwa uye kubvisa zvose zvaunoda pasina kunyora kakawanda code.
- Inoshandura zvinyorwa zvinobuda ku UTF-8 uye zvinyorwa zvinouya kuUnicode. Izvi zvinoreva kuti haufaniri kushushikana nezvekodhi dzakapiwa kuti rugwaro rwave rwuchinyora coding kana Mushonga Wakanaka unogona kuzvidzivirira.
- BeautifulSoup inofungidzirwa yakakwirira kupfuura mamwe mazita anonzi Python avo vakadai se html5lib uye lxml. Inobvumira kuedza nzira dzakasiyana dzekuparidzira. Chimwe chinhu chakaipa chemujiyu uyu, zvisinei, ndechekuti inopa huwandu hwekushandura pazvinoshandiswa nokukurumidza.
Chii chaunoda kuparadzira webusaiti ne BeautifulSoup?
Kutanga kushanda ne BeautifulSoup, unofanirwa kuva nePython programming environment (zvichida kweruwa kana seva-based) yakagadzirirwa pamashini yako. Python inowanzotanga kushandiswa mu OS X, asi kana ukashandisa Windows, unofanira kutora uye kuisa mutauro kubva pawebsite yepamutemo.
Unofanirwa kuva neChechi Yakanaka uye Unokumbira ma modules akaiswa.
Pakupedzisira, kuziva uye kusununguka kushanda ne HTML tagging nekugadzirisa kunonyatsoshanda sezvo uchange uchishanda nedhesi yakagadzirwa.
Kuwedzerwa Zvinyorwa uye ZvakanakaShandura makiraibhurari
Nemaitiro ekunyora kwePython akagadzirirwa zvakanaka, iwe zvino unogona kugadzira faira idzva (uchishandisa nano, somuenzaniso) nezita ripi raunoda.
Bhuku rekukumbira rinoita kuti iwe ushandise fomu inogona kuverengwa nevanhu HTTP mukati mezvirongwa zvako zvePython apo BeautifulSoup inotora zvakagadzirwa nokukurumidza nokukurumidza. Iwe unogona kushandisa zvinyorwa zvekutumira kuti uwane mabhuku maviri.
Nzira yekuunganidza uye kuparadzanisa peji yewebhu
Shandisa zvikumbiro. tora
nzira yekuunganidza URL ye peji yewebhu kubva kwaunoda kubvisa deta. Zvadaro, tanga chinhu chakanaka chaSainpoup kana kuti muti wepakati. Chinhu ichi chinotora rugwaro kubva kune zvinyorwa sezvikonzero zvaro ndokubva zvarishandura. Ne peji rakaunganidzwa, rakadzingwa uye rakagadzirirwa sechinhu chakanakisisa, iwe unogona kuenderera mberi kuti uunganidze data yaunoda.
Kubvisa zvinyorwa zvaunoda kubva pane peji yebhundaneti
Pose paunoda kuunganidza data yewebhu, unoda kuziva kuti iyo data inotsanangurwa sei ne Document Object Model (DOM) peji yewebhu. Muchikwata chako chebhundaneti, pfupa-chengetedza (kana uchishandisa Windows), kana CTRL + chovha (kana uchishandisa macOS) pane chimwe chezvinhu zvinoumba chikamu chemashoko ekufarira. Somuenzaniso, kana iwe uchida kubvisa dhepfenyuro pamusoro pezvidzidzo zvevadzidzi, chengeta pane rimwe remazita emudzidzi. Mamiriro ezvinyorwa zvinotarisana nepamusoro, uye mukati maro, uchaona chinhu chemenu chakafanana neChecheche Element (yeFirefox) kana Chengetedza (yeChrome). Dzvanya zvakakosha Ongorora chinhu chemenu, uye webhandisi yevashanduri vanobva pawebhu vachaonekwa mukati me browser yako.
BeautifulSoup isiri nyore asi yakasimba yeHTML parsing tool inokubvumira zvakawanda zvekushandura kana kuchera mawebsite . Paunenge uchishandisa, usakanganwa kuchengeta mitemo yakawanda yekutsvaga zvakadai sekutarisa maGwaro neMagariro eWebsite; kudzokorora nzvimbo yacho nguva dzose uye kuvandudza code yako maererano nekuchinja kunoitwa pawebsite. Kuva neruzivo pamusoro pekutsvaga mawebhusayithi nePython uye BeautifulSoup, iwe zvino unogona kuwana nyore nyore data yewebhu iwe waunoda purojekiti yako Source .